DU Recorder APK 2.4.5.1 Android को लागि डाउनलोड गर्नुहोस्
स्क्रिन रेकर्डिङ प्रक्रिया विश्वव्यापी मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू बीच व्यापक लोकप्रियता छ। मोबाइल प्रविधिको विकाससँगै विकासकर्ताहरूले धेरै सुविधाहरू थपेका छन्। ती सुविधाहरूमध्ये, स्क्रिन रेकर्डिङ प्रकार्यहरू अब प्रयोगकर्ताहरू बीच लोकप्रिय हुँदैछन्। त्यसैले अब तपाई सजिलैसँग सार्वजनिक रूपमा धेरै स्क्रिन रेकर्डिङ अनुप्रयोगहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। ती अनुप्रयोगहरू मध्ये, DU रेकर्डर स्क्रिन रेकर्डिङको लागि एक अद्भुत अनुप्रयोग हो। यो एक प्रयोगकर्ता-अनुकूल अनुप्रयोग हो र तपाईंको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको लागि धेरै राम्रोसँग उपयुक्त छ। यसमा कुनै शंका छैन, अन्य स्क्रिन रेकर्डिङ अनुप्रयोगहरू भन्दा, DU रेकर्डर डाउनलोड गर्नाले प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्तम विकल्पहरू दिन्छ, र अब यसलाई इन्टरनेटबाट सीधै डाउनलोड गर्न सम्भव छ।
स्क्रिन रेकर्डिङ के हो?
स्क्रिन रेकर्डिङ भनेको तपाइँको स्क्रिन खिच्ने प्रक्रिया हो। यो सुविधा प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो यन्त्र स्क्रिनमा भएका सबै घटनाहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, विन्डो रेकर्ड गर्नुहोस्, वा पूर्ण-स्क्रिन मोडहरू रेकर्ड गर्नुहोस्। यस सुविधाको साथ, तपाइँ भिडियो निर्देशनहरू साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो सम्मेलनहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो व्याख्यानहरू, र तिनीहरूलाई खेल्दा खेलहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुविधा अब धेरै स्क्रिन रेकर्डिङ एपहरूमा परिमार्जित सुविधाहरूको साथ आउँछ। त्यसोभए अब ती मध्ये एक प्रयोग गरेर तपाइँ यी बहु सुविधाहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
स्क्रिन रेकर्डिङ सुविधा मोबाइल अपरेटिङ सिस्टमको साथसाथै तपाईंको पीसीको लागि पनि आउँछ। समर्थन अनुप्रयोग प्रयोग गर्दै। यहाँ तपाईंले सुरक्षित र समर्थन उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ किनभने ती अधिकांश उपकरणहरू हानिकारक छन् र तपाईंको यन्त्र वारेन्टीमा क्षति पुग्छन्।
DU रेकर्डर के हो?
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, DU रेकर्डर एक अद्भुत स्क्रिन रेकर्डिङ अनुप्रयोग हो र यो क्रस-प्लेटफर्म हो। यसको मतलब तपाइँ यसलाई एन्ड्रोइड र आईओएस दुबै प्लेटफर्महरू र सबै एन्ड्रोइड स्मार्टफोन उपकरणहरू, आईफोनहरू, आईप्याडहरू र आईपड टच उपकरणहरूसँग कुनै पनि कठिनाइ बिना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो अनुप्रयोग तपाईको मोबाइल उपकरणहरूको लागि मात्र होइन, यहाँ DU रेकर्डर तपाईको पीसी उपकरणहरूसँग पनि उपयुक्त छ।
अन्य स्क्रिन रेकर्डरहरू भन्दा, तपाइँ यो रेकर्डर एप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यो प्रयोगकर्ता-अनुकूल प्रकार्यहरूसँग आउँछ। त्यसैले जो कोहीले सजिलै बिना कुनै कठिनाई यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनुप्रयोगले धेरै फाइदाहरू समावेश गर्दछ जस्तै तपाईंले खेल्दै गर्दा खेलहरू रेकर्ड गर्ने, भिडियो कलहरू रेकर्ड गर्ने, भिडियो सम्मेलनहरू रेकर्ड गर्ने, तपाईंको प्रस्तुतीकरणहरू रेकर्ड गर्ने, चलचित्र हेर्दै गर्दा रेकर्ड गर्ने, लाइभ कार्यक्रमहरू रेकर्ड गर्ने क्षमता र त्यहाँ धेरै सुविधाहरू समावेश छन्। यी फाइदाहरूसँग, DU रेकर्डर सबैभन्दा परिचित स्क्रिन रेकर्डिङ प्लेटफर्मको रूपमा चिनिन्छ जुन तपाईं सजिलैसँग आफ्नो स्मार्टफोन र पीसी उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी DU रेकर्डर एप प्रयोग गर्न सक्छौं
तपाईंको स्मार्ट एन्ड्रोइड उपकरण, आईओएस उपकरण, वा कम्प्युटर (विन्डोज वा म्याक) मा DU रेकर्डर स्थापना गरेपछि तपाईंले धेरै अवसरहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाइँ YouTube र Facebook भिडियोहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँको मनपर्ने संगीत ट्र्याकहरू थप्न सक्नुहुन्छ, र तपाइँको यन्त्र मेमोरीमा बचत गर्न सक्नुहुन्छ। आखिर, तपाइँ तिनीहरूलाई सामाजिक मिडियामा साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ थप रोचक प्रविधिहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो सबैभन्दा उन्नत प्लेटफर्म पनि हो।
DU रेकर्डर को विशेषताहरु
DU रेकर्डर अनुप्रयोगमा धेरै सुविधाहरू समावेश छन्। ती सबै सुविधाहरूले एप प्रदर्शनलाई समृद्ध बनाउँछ र तपाईंलाई स्क्रिन रेकर्डिङ कार्यक्षमताहरूको आनन्द लिन स्वतन्त्रता दिन्छ। त्यसोभए ती रोचक सुविधाहरू हेर्नुहोस् जुन DU रेकर्डरसँग आउँछन्।
DU रेकर्डर अनुप्रयोग मोड apk, प्रो संस्करण, र उन्नत सुविधाहरूको साथ आउँछ।
यो रोचक DU स्क्रिन रेकर्डर प्रो संस्करण एन्ड्रोइड5उपकरणहरूको लागि रूट पहुँच आवश्यक छैन
DU रेकर्डर स्थापना गर्न आईओएस जेलब्रेक गर्न आवश्यक छैन।
तपाइँ प्ले स्टोरबाट DU रेकर्डर सित्तैमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। वैसे, यसले इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष डाउनलोड एपहरू समर्थन गर्दछ। यहाँ तपाईंले DU रेकर्डर apk फाइल ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
DU रेकर्डर अनुप्रयोग प्रयोग गर्दा तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यसले कष्टप्रद प्रयोगकर्ताहरूको लागि इन-एप खरिदहरू ल्याउँदैन।
तपाईंको यन्त्रको अगाडिको क्यामेरा जस्तै फेस क्यामेरा सक्षम गर्ने क्षमता। तपाईंले फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलहरूका लागि खेलहरू रेकर्ड गर्न यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
स्क्रिन रेकर्डिङका लागि मात्र होइन, बाहिरी आवाजहरू रेकर्ड गर्न पनि यो एप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाइँ सजिलैसँग स्क्रिन रेकर्डिङहरू नियन्त्रण गर्न सेटिङहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ तपाइँ भिडियो सम्पादन सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी यस अनुप्रयोगलाई दर्जनौं अन्य एपहरूमध्ये उत्कृष्ट भिडियो सम्पादकको रूपमा परिचय गराउन सक्छौं।
तपाईंले यहाँ सिर्जना गर्नुभएको भिडियोहरूमा सजिलै संग संगीत ट्र्याकहरू थप्न सक्नुहुन्छ
DU रेकर्डर कुनै विज्ञापन सुविधा छैन। त्यसैले यसको प्रयोग गर्दा तपाईले कुनै समस्याको सामना गर्नु पर्दैन।
DU सेटिङहरूमा, तपाईंले पज र रिजुम जस्ता स्क्रिन रेकर्डिङका लागि कार्यहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ
तपाईं आफ्नो खेलहरूको लागि 1080p, 12mbps, 60fps मा सुपर HD ग्राफिक्सको साथ उच्च गुणस्तरमा भिडियोहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ।
उत्तम सम्पादन उपकरणहरूको साथ उत्तम भिडियो सम्पादक सेटिङहरू
कुनै रेकर्डिङ समय सीमा छैन। त्यसैले तपाईं सजिलै लामो-स्क्रिन भिडियोहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ
विभिन्न सुविधाहरू समावेश
खेल, सम्मेलन, लाइभ शो स्ट्रिम, लाइभ स्ट्रिमिङ, भिडियो च्याट, चलचित्र, आदि रेकर्ड गर्ने क्षमता।
तपाईं अडियो संग खेल को आफ्नो स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब योसँग आन्तरिक आवाजहरू रेकर्ड गर्ने क्षमता पनि छ।
तपाईं यो DU रेकर्डर YouTube, Facebook, Twitter, र धेरै अन्य लोकप्रिय प्लेटफर्महरूको लागि स्क्रिन रेकर्ड गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
सिर्जना गरिएको खेल भिडियोहरू साझेदारी गर्ने क्षमता
त्यहाँ धेरै अन्य सुविधाहरू पनि छन्। उपकरण प्रयोग गर्दा तपाईंले ती मध्ये धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ अझै पनि यो अद्भुत एप स्टोर प्रयोग गर्नुहुन्न भने, त्यसपछि हतार गर्नुहोस् र यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। यसलाई प्रयोग गर्दा, तपाईं धेरै कार्यहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। ती सबै प्रकार्यहरू लचिलो र रोचक छन्।
DU रेकर्डर apk
DU रेकर्डर apk एन्ड्रोइड समर्थन फाइल ढाँचा हो जुन तपाईंले इन्टरनेटबाट सीधा फाइल डाउनलोड गर्दा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। Apk ले एन्ड्रोइड प्याकेज किट परिभाषित गर्दछ। जब तपाइँ इन्टरनेटबाट सीधा डाउनलोड गर्न अनुप्रयोगहरू खोज्नुहुन्छ, तब तपाइँले यो ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ, एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूका लागि तपाईंले एपहरू डाउनलोड गर्न गुगल प्ले स्टोर अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाइँको खोजी एपहरू प्ले स्टोरमा समावेश हुँदैनन्, तपाइँले तिनीहरूलाई बाहिरी रूपमा डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यसोभए तपाईंले एपीके फाइल ढाँचामा एपहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।
DU Recorder Pro apk रेकर्डर अनुप्रयोगको सबैभन्दा उन्नत संस्करण हो। यसले प्रिमियम सुविधाहरू सक्षम गर्दछ, र यदि तपाईं थप सुविधाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यो प्रो apk संस्करण डाउनलोड गर्नुपर्छ।
DU रेकर्डर डाउनलोड - मेरो एन्ड्रोइड फोनमा कसरी डाउनलोड गर्ने?
गुगल प्ले स्टोरबाट
प्रयोगकर्ताहरूले गुगल प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग DU रेकर्डर डाउनलोड गर्न सक्छन्। यहाँ तपाइँ केहि निर्देशनहरू पालना गर्न सक्नुहुन्छ र ती हुन्,
चरण ०१। प्ले स्टोर एप खोल्नुहोस्। यसको लागि, प्ले स्टोर एप आइकनमा ट्याप गर्नुहोस्। तपाइँ यसलाई तपाइँको यन्त्रको गृह स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ।
चरण०२। त्यसपछि तपाईंले DU रेकर्डर खोज्नुपर्छ। त्यसको लागि खोज पट्टीमा DU रेकर्डर टाइप गर्नुहोस्।
चरण०३। अब तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो देखा पर्नेछ। त्यसपछि स्थापना मा ट्याप गर्नुहोस्।
त्यसपछि DU रेकर्डर सफलतापूर्वक डाउनलोड र स्थापना हुनेछ, यहाँ तपाईंले अन-स्क्रिन निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्नेछ।
apk फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्
अब तपाईं सजिलैसँग इन्टरनेटबाट DU रेकर्डर अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईंले नवीनतम DU रेकर्डर संस्करण चयन गर्नुपर्छ। त्यस पछि, तपाइँ तलका सरल निर्देशनहरू पालना गर्न सक्नुहुन्छ। यो सजिलै संग आफ्नो स्मार्ट एन्ड्रोइड उपकरणमा DU रेकर्डर डाउनलोड गर्न सम्भव छ। यहाँ तपाईंले एप डाउनलोड गर्दा apk फाइल ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्छ।
DU रेकर्डर डाउनलोड र स्थापना गर्न,
चरण ०१। सुरुवाती चरणको रूपमा, पहिले, तपाईंले DU Recorder apk फाइल डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। यो वेब बाट सीधा अनुप्रयोग apk फाइल डाउनलोड गर्न सम्भव छ।
चरण०२। एप डाउनलोड प्रक्रिया पूरा भएपछि, तपाईंले खुला विन्डो बन्द गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि दोस्रो चरणको रूपमा, तपाईंले अज्ञात स्रोत विकल्प सक्षम गर्नुपर्छ। यो आवश्यक कुरा हो । अन्यथा, तपाइँ कुनै पनि तेस्रो-पक्ष अनुप्रयोग स्थापना गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
त्यसको लागि, उपकरण सेटिङहरू खोल्नुहोस्> सुरक्षा सेटिङहरू> त्यसपछि तपाईंले अज्ञात स्रोत विकल्प सक्षम गर्नुपर्नेछ। यसको लागि, चेकबक्समा एक टिक राख्नुहोस्।
चरण०३। त्यस पछि, तपाईंले उपकरण डाउनलोड फोल्डर खोल्नु पर्छ।
चरण०४। यहाँ तपाईंले डाउनलोड गरिएको DU Recorder apk फाइल चयन गर्नुपर्छ। स्थापना जारी राख्न यसलाई ट्याप गर्नुहोस्। एप्लिकेसन इन्स्टल प्रक्रिया जारी राख्नको लागि तपाईले आवेदनका सर्त र सर्तहरूसँग सहमत हुनुपर्नेछ।
यो प्रक्रिया पूरा गर्न अन्य सेकेन्ड लाग्नेछ।
अब DU रेकर्डर सफलतापूर्वक स्थापना भएको छ। यसलाई खोल्नुहोस् र तपाईंको स्क्रिन रेकर्ड गर्दा अनुप्रयोगको आनन्द लिनुहोस्। यो प्रक्रिया मात्र अचम्मको छ।
पीसी को लागी DU रेकर्डर
DU रेकर्डर तपाईको मोबाइल उपकरणको लागि मात्र होइन। तपाइँ यसलाई तपाइँको पीसी को लागी सजिलै संग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि, तपाईंले DU रेकर्डर apk फाइल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र आवश्यक भएमा तपाईंले सहायक एन्ड्रोइड इमुलेटर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। एन्ड्रोइडको लागि DU रेकर्डर र PC को लागि DU रेकर्डरको डाउनलोड प्रक्रिया बिल्कुल फरक छ। तपाइँको पीसी प्रक्रियामा डाउनलोड धेरै विस्तारित छ। त्यसोभए हेरौं कसरी डाउनलोड प्रक्रिया प्रवाह हुन्छ।
चरण ०१। सुरुमा, तपाईंले सहायक मोबाइल इमुलेटर डाउनलोड गर्नुपर्छ। यो एक इमुलेटर प्रयोग गर्न आवश्यक छ, र यहाँ तपाइँ Bluestacks संग प्रक्रिया चलाउन सक्नुहुन्छ।
चरण०२। Bluestacks डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि Bluestack आइकनमा ट्याप गर्नुहोस् र Bluestacks अनुप्रयोग खोल्नुहोस्।
चरण०३। यहाँ तपाईंले आफ्नो Google खाता प्रयोग गर्नु पर्छ खातामा लग इन गर्न जुन Bluestacks सँग जोडिएको छ।
चरण०४। सफलतापूर्वक लग इन गरेपछि, त्यसपछि तपाइँ अनुप्रयोग apk फाइल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा गुगल प्ले स्टोर खोल्न सक्नुहुन्छ।
चरण ०५। खोज पट्टीमा DU रेकर्डर खोज्नुहोस्।
चरण ०६। त्यसपछि तपाईंले DU रेकर्डरमा ट्याप गर्नुपर्नेछ, र यसले स्वचालित रूपमा एप स्थापना सुरु गर्नेछ।
माथिका चरणहरू पछ्याएर, तपाईं सजिलैसँग आफ्नो कम्प्युटरको लागि DU रेकर्डर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबैभन्दा लचिलो तरिका हो, र यहाँ तपाईं धेरै लाभहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
DU रेकर्डर डाउनलोड गर्नुहोस्